Aogositra 14, 2018 Admin
Bitcoin mihoatra noho ny volamena ao ponenana boky
A tsara hajaina cryptocurrency mpikaroka, Nic Carter, hoy Bitcoin dia nihoatra noho ny volamena OTC tsena amin'ny boky ponenana, na dia manoloana ny 70% Mitete ao amin'ny vidiny. Araka ny antontan'isan'ny fanadiovana ny London bullion tsena ny volamena maneran-ny-ny latabatra (OTC) tsena dia eo amin'ny lalana mba hanorim-ponenana $446 lavitrisa in 2018, rehefa nanorim-ponenana latsaky ny $30 lavitrisa amin'ny isam-bolana nanomboka tamin'ny Janoary fototra. Mifanohitra, mifototra amin'ny angona nomen'ny Coin mari-pandrefesana, ny cryptocurrency tsena mpamatsy rakitra voalaza ny Carter, ny Bitcoin tsena dia efa ampiasaina $848 arivo tapitrisa isan-taona ity sy eo an lalana hisongona $1.38 tapitrisa tapitrisa ny fitsingerenan'ny taona.
Raha jerena fa LBMA kaonty fara fahakeliny 70% ny volamena maneran-boky OTC, amin'ny $848 lavitrisa, Bitcoin efa nanorim-ponenana kokoa sarobidy eo lasa 8 volana noho ny nilaza mialoha ponenana horonam-bolamena manontolo tsena in 2018. Ny discrepancy ao amin'ny horonam-tsena OTC ny volamena sy ny boky ny Bitcoin maneho ny mahazatra dia efa manomboka manaiky sy hanaraka Bitcoin ho toy ny Premier fivarotana-tsarobidy sy ny fitaovana amin'ny fifanakalozana, noho ny tombony manaitra ny volamena, toy ny fungibility, liquidity, ary transportability.
Conservatively, (fanitsiana vinavina), Bitcoin no nanorim-ponenana $ 848b tamin'ity taona ity, ary amin'ny lalana mba hanorim-ponenana $ 1.38T. Bitcoin, hita, dia moramora mihoatra noho ny volamena OTC tsena amin'ny boky ponenana.
— Nic Carter (@nic__carter) Aogositra 12, 2018
Jamaika Stock Exchange ny hanomboka crypto-pananana varotra
Ny Jamaika Stock Exchange mikasa ny hanolotra cryptocurrencies toy ny fananan'ny tradeable ho an'ny mpanjifa. Canadian FinTech startup Blockstation dia miara-miasa amin'ny JSE noho ny fananganana vaovao fananan'ny nomerika sehatra varotra, ny sehatra dia nametraka ny handeha velona tamin'ny faran'ny taona. JSE talen'ny fitantanana Marlene Street hoy Forrest “Ny lalao farany amin'ny faran'ny andro dia ny famantarana ara-barotra, ny farany dia marani-tsaina lalao fifandraisana, ny farany dia ny hanomezana lalao amin'io faritra io ny tsena izay te io vokatra, mba hanomboka hanao izany amin'ny fomba azo antoka.”
Blockstation mpiara-manorina sy lehiben'ny orinasa maritrano Jai Waterman hoy ny startup dia miara-miasa amin'ny JSE mba hampivelatra ny fomba amam-panao dikan-ny sehatra ho an'ny fifanakalozana. Manokana ny fangatahana avy amin'ny JSE no ahitana fitaovana ahafahany manara-maso tsena fanodinkodinana sy ny zavatra ilaina hafa fitsipika, dia nanamarika. “Ny asa fitoriana dia ny hanomezana ... azo antoka fomba varotra cryptocurrencies amin'ny broker-mpivarotra sy ny fifanakalozana tahiry, Izahay manome ny tahiry hanakalo ny teknolojia ho broker-mpivarotra harato sy repository, dia hatrany farany-to-farany, ny fiainany tsingerim-barotra - toa ny amin'ny Fiarovana - dia afaka manao toy izany koa ny tena amin'ny blockchain sy cryptocurrencies.”
Cash Square Manokatra Bitcoin mividy & nivarotra in rehetra 50 Hoy ny
Tsy ampy tapa-bolana taorian'ny fizarana ny cryptocurrency Square tombony efa nitombo avo roa heny amin'ny Q2 2018, ny fandoavam-bola dia nanambara orinasa, mahomby avy hatrany, mpampiasa dia afaka mampiasa Cash izao App hividy Bitcoin rehetra fanjakana dimam-polo. Fisian'ny amin'ny toerana rehetra fanjakana dimam-polo ny Cash Square App hifaninana mivantana kokoa amin'ny Coinbase, ny mpitarika mpanjifa fangatahana cryptocurrency fividianana ao amin'ny United States.
Coinbase mihambo ho efa afaka ny varotra mihoatra ny $150 lavitrisa cryptocurrencies hatramin'ny fandefasana amin'ny 2012, niteraka mihoatra noho ny $1 lavitrisa amin'ny vola miditra amin'ny 2017 avy amin'ny tatitra 20 tapitrisa mpampiasa voasoratra anarana. Rehefa tapitra ny 2017, Square nitatitra mihoatra noho ny 7 tapitrisa isam-bolana mpampiasa mavitrika, maro no nanatevin-daharana ny ataon'ny mpiara-to-mpiara USD naniraka fanompoana.
Red, fotsy, ary bitcoin. Ankehitriny ianao dia afaka mampiasa Cash App hividy bitcoin rehetra 50 Hoy ny. pic.twitter.com/D4fhVRz7WL
— Cash App (@CashApp) Aogositra 13, 2018
$139M amidy manerana ny tsena amin'izao fotoana izao
BITCOIN FALLING TO $7,200?!?!?! | Mafana: Facebook Libra HEARING
Jolay 18, 2019
altcoin altcoin isan'andro altcoins bitcoin bitcoin fanadihadiana bitcoin bullish Bitcoin fianjerana bitcoin fianjerana over bitcoin vaovao bitcoin vaovao amin'izao fotoana izao bitcoin prediction Bitcoin vidiny bitcoin price analysis bitcoin Price fitomboana Price bitcoin vaovao bitcoin price prediction bitcoin fanadihadiana ara-teknika bitcoin amin'izao fotoana izao bitcoin barotra andian-tsoratra rojo BTC btc vaovao btc amin'izao fotoana izao cardano crypto cryptocurrency cryptocurrency tsena cryptocurrency vaovao cryptocurrency varotra crypto vaovao eos ethereum ethereum fanadihadiana ethereum vaovao ethereum Price how to make money vola investing bitcoin investing crypto dia bitcoin nanao doza litecoin vaovao ripple Tron xrp